people Nepal » ट्राफिक प्रमुखलाई फोनः बाइकको ठूलो आवाजले आमा ढल्नुभो ! ट्राफिक प्रमुखलाई फोनः बाइकको ठूलो आवाजले आमा ढल्नुभो ! – people Nepal
ट्राफिक प्रमुखलाई फोनः बाइकको ठूलो आवाजले आमा ढल्नुभो !
Posted on June 21, 2017 by Purna Nanda Joshi
७ असार, बुधबार । मंगलबार दिउँसो ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख डिआइजी मिङ्मार लामालाई कालिमाटीबाट अनौठो गुनासोसहितको फोन आयो । फोनमा बोल्नेले हतारिएर सुनाए, ‘यहाँ बाइकको ठूलो आवाजले एकजना आमा बेहोस भएर रोडमै ढल्नुभो । तपाईंहरुले केही त गर्नैपर्‍यो ।’
फोन गर्ने व्यक्तिले यस्ता ठूला आवाज निकाल्दै कुद्ने मोटरसाइकलको नियन्त्रण गर्न सुझाव दिँदै फोन काटे ।
बुधबार संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण उपसमितिमा उपस्थित ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख डीआईजी लामाले सुनाए-‘हुन पनि हो, हामीले हर्न त निषेध गर्‍यौं । तर, ठूला आवाज गरेर दौडिने बाइक पनि नियन्त्रण गर्न जरुरी देखेका छौं । यस्ता बाइकले मान्छेको ज्यान नै जोखिममा पनि पारे ।’
उनले यस्तो गुनासो लगत्तै विभिन्न स्थानबाट ठठूला आवाज निकोले दौडने बाइकलाई नियन्त्रणमा लिएर अध्ययन गरेको बताए । ‘यस्ता धेरै बाइक त मोडिफाइ गरेर आवाज आउने बनाएर चलाइँदो रहेछ । केहीका भने आफ्नै आवनज नै त्यस्तो हुँदो रहेछ’ डीआईजी लामाले भने, ‘मोडिफाइ गरेकालाई कारवाही गर्न सकिन्छ । तर, कम्पनी मेड नै आवाज आउने तबरका बाइकलाई के गर्ने ?’
यसबारे यातायात ब्यवस्था विभागसँग परामर्श गरिसकेको उनले बताए । उनकाअनुसार यातायात ब्यवस्था विभागले त्यस्त्ाा बाइकलाई रिङ्गरोडभित्र प्रवेशमा रोक लगाउन सकिने बताएको छ ।
तर, त्यसको औपचारिक निर्णय भने भएको छैन । ‘काठमाडौंमा ध्वनी प्रदुषण रोक्न नो हर्न सफल भएको छ । ठूला आवाज निकालेर कुद्ने बाइकले पनि विभिन्न समस्या सिर्जना गरेका छन्’ लामाले भने, ‘केही त गर्नैपर्छ । मान्छे नै ढल्ने गरी आवाज निकाल्ने बाइकलाई नियमन आवश्यक छ ।’
पछिल्लो समयमा मोटरसाइकललाई मोडिफाइ गरेर ठूलो आवाज आउने बनाउने प्रचलन बढेको छ । ठूलो आवाज आउने बाइकलाई ‘सानदार’ मान्ने सोचका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।
ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक ब्यवस्थामा सुधार गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग मिलेर विभिन्न कामहरु अघि बढाउन लागेको बताए । ‘न्युरोडको दुई साइड पार्किङलाई एक साइडमा ल्यायौं तर, सडकमा सित्तैमा पार्किङ गर्न दिएसम्म समस्या बल्झिरहन्छ’ उनले भनेका छन् ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म अनावश्यक हर्न बजाउने ६ हजार सवारी कारवाहीमा परेको छन् ।